လှိုင်းတံပိုး | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
၏အခြားအဆုံးမှာ အပူလှိုင်းများ ငါတို့တွေ့ပြီ အအေးလှိုင်း အရာလည်းနည်းတူအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ သဘာဝတရားသည်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့ကိုအစွန်းရောက်စေသည်၊ သို့သော်အားသာချက်မှာယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီအာကာသထဲမှာမင်းတွေ့လိမ့်မယ် အကြံပေးချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက် အအေးစာလုံးပေါင်းနှင့်ဆက်စပ်သော။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့အားရာသီဥတုကိုပိုမိုနားလည်စေရန်ဤအရာများသည်
စပိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကရီရီယန်ကျွန်းများ မှလွဲ၍ ကျွန်းဆွယ်တစ်လျှောက်ရှိဆိုက်ဘေးရီးယားမှဆင်းသက်လာသောအအေးလှိုင်းကိုခံစားခဲ့ရသည်။
စပိန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရသောအအေးလှိုင်းသည်နှင်းများကိုအလွန်နိမ့်သောအဆင့်များမှ ထား၍ ...
အအေးမိဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါတို့သိသလား။ အခုတော့စပိန်တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါးမိုးလေ ၀ သအခြေအနေကိုတွေ့ကြုံတဲ့အခါ ...
ဒါဟာရောက်မသွားပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ဆောင်းရာသီကဒီမှာ။ သို့မဟုတ်အစား, အအခက်ခဲဆုံးရက်များ၏ ...
por ဆာဂျီယို ဂယ်လီဂို လွန်ခဲ့တဲ့7အနှစ် .
por David melguizo လွန်ခဲ့တဲ့9အနှစ် .
အအေးခန်းကကျွန်တော်တို့ကိုလာလည်ပတ်တာများပြီးမကြာခဏဆိုသလိုဒုစရိုက်ကိုညည်းညူတာကိုမှတ်မိဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲဒါ ...